Accueil > Gazetin'ny nosy > Ben’ny tanànan’Antananarivo : Tsy voatery ho Tim na Mapar
Raha tsy misy ny fiovana noho ny antony manoloana (???) dia any amin’ny volana septambra na oktobra any no hanatanterahana ny fifidianana izay ho ben’ny tanàna sy izay ho mpikambana ao amin’ny Antenimieran’ny tanàna manerana ny Nosy, satria tapitra koa ankehitriny ny fe-potoam-piasan’ireo olom-boafidy mitantana tanàna na kaominina manerana an’i Madagasikara amin’izao fotoana.
Isan’ny toerana manan-danja manokana na “stratégique” ny toeran’ny ben’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra amin’ny maha-renivohi-pirenena azy.
Efa samy miomana ny ho amin’izany ny ankolafin-kery mpisehatra ara-pôlitika isany, ka ny malaza izao dia ny Tim sy ny Mapar. Ireo rahateo no nisongadina tamin’ny fifidianana indroa miantoana farany teo teto, dia ny fifidianana filohampirenena sy ny fifidianana solombava.
Misy ny milaza fa mbola mety hihena lavitra noho iny taham-pahavitrihana tamin’ny fifidianana solombava tamin’ny 27 May iny ny ho taham-pahavitrihan’ny mpifidy amin’io fifidianana kaominaly ho avy io. Mety ho marina izany saingy tsy marina 100%.
Izahay dia mahita fa miankina amin’ny mpifaninana mirotsaka hofidiana koa ny fahavitrihan’ny mpifidy. Raha mbola ny avy amin’ny Tim sy ny avy amin’ny Mapar no hitan’ny olona fa tena misongadina amin’ireo mpifaninana dia tsy hifanalavitrra amin’iny taham-pahavitrihana tamin’ny fifidianana solombava iny no hiseho ary mety vao mainka hihena tokoa aza.
Tsy voatery ho olon’ny Tim na ny avy amin’ny Mapar koa anefa no hisongadina raha ho an’Antananarivo; ary marina hatrany izany ho an’ny kaominina isanisany na ny distrika isanisany, raha iny fifidianana solombava iny no itodihana, sy raha ny toetsain’ny mpifidy amin’ny ankapobeny no hadihadiana.
Eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena koa dia toraka izany e! Tany Etazonia ange ka tsy dia nampoizin’ny mpanara-maso maro loatra ny haha-filoham-pirenena an’i Trump e! Toraka izany koa ny tany Frantsa satria tsy isan’ireo mpisehatra pôlitika malaza tany i Frantsa hatrizay i Emmanuel Macron.
Raha ny teto Madagasikara manokana dia mbola azo raisina ho toa izany koa ny tamin’ny 1958 izay naha-ben’ny tanànan’Antananarivo an’i Stanislas Rakotonirina izay tsy avy amin’ny antoko nalaza teto tamin’izany fa “mahaleo tena”. Ny tamin’ny 1999 nahalany an-dRavalomanana dia nahitana taratra an’izay hoe “tsy voatery ho olon’ny antoko efa malaza (ratsy na tsara) no ho lany”. Tahaka izany ny nahatafakatra an’i Andry Rajoelina ho ben’ny tanàna teto.
Raha misy olona manana ny lanjany manokana, ankoatra ny avy amin’ny Mapar na avy amin’ny Tim mirotsaka ben’ny tanàna eto, dia mety hisongadina koa amin’izao ho avy izao. Ny irariana fotsiny dia mba olona tena mpanao pôlitika fa tsy mpilalao pôlitika na mpanao ramasabomanga toy ny hita tato anatin’ny 30 taona farany. Tena mpanao pôlitika, hoy izahay, fa “tsy mpilalao pôlitika”. Antenaina fa azontsika mpamaky ny dikan’izany.